Politika momba ny fiainana manokana - BikeHike
Lahatsoratra soso-kevitra: Ny adiresin'ny tranokalanay dia: https://bikehike.org.
Lahatsoratra soso-kevitra: Rehefa mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokala ireo mpitsidika dia manangona ireo angona naseho tamin'ny endrika fanehoan-kevitra, ary koa ny adiresy IP an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa tranonkalan'ny filaharana mba hanampy amin'ny fitiliana spam.
Misy string tsy fantatra anarana noforonina avy amin'ny adiresy imailanao (antsoina hoe hash) ihany koa dia azo omena amin'ny serivisy Gravatar raha te hampiasa izany ianao. Ny politika manokana momba ny tsiambaratelo Gravatar dia hita eto: https://automattic.com/privacy/. Aorian'ny fankatoavana ny fanehoan-kevitrao, ny sarinao ao amin'ny mombamomba anao dia hita amin'ny vahoaka amin'ny resaka ifanaovanao.
Lahatsoratra soso-kevitra: Raha mandefa sary ao amin'ny tranonkala ianao, dia tokony hialanao ny mampakatra sary miaraka amin'ny angon-drakitra (GPS EXIF)). Ny mpitsidika ao amin'ny tranonkala dia afaka mandefa sy mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny sary ao amin'ny tranonkala.
Lahatsoratra soso-kevitra: Raha mamela fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokalanay ianao dia afaka misafidy ny hamonjy ny anaranao, ny adiresy mailaka sy ny tranonkala amin'ny cookies. Ireo dia noho ny fanao mahazatra anao ka tsy mila mameno ny tsipiriany intsony ianao rehefa mamela fanamarihana hafa. Ireo cookies dia haharitra mandritry ny herintaona.
Raha mitsidika ny pejin-tranonkalanay ianao dia hametraka cookie tsy maharitra mba hahafantarana raha manaiky cookies ny browser-nao. Ity cookie ity dia tsy misy angon-drakitra manokana ary dia esorina rehefa manidy ny browser ianao.
Rehefa miditra ianao dia hanangana cookies maromaro ihany koa mba hamonjena ny fampidirana fidirana sy ny safidinao. Ny fidirana cookies dia maharitra roa andro, ary ny safidin-tsakafo ho an'ny efijery farany mandritra ny herintaona. Raha mifidy "Remember Me" ianao, dia hijanona mandritra ny roa herinandro ny fampidiranao. Raha miala ao amin'ny kaontinao ianao dia hesorina ny cookie login.
Raha manitsy na mamoaka lahatsoratra ianao dia hisy cookie fanampiny ho voavonjy ao anaty navigateur. Ity cookie ity dia tsy ahitana angon-drakitra manokana ary manondro fotsiny ny lahatsoratry ny lahatsoratra nosoratanao. Vita aorian'ny andro 1 izany.
Hiditra ao anaty tranonkala hafa
Lahatsoratra soso-kevitra: Ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity dia mety ahitana ny votoatin'ny tranonkala (ohatra ny horonan-tsary, sary, lahatsoratra, sns.). Ny votoatin'ny tranokala hafa avy amin'ny tranonkala hafa dia mitovitovy amin'ny fomba mitovy amin'ilay nitsidika ilay tranonkala hafa.
Ireo tranonkala ireo dia afaka manangona angon-drakitra momba anao, mampiasa cookies, mametraka fanampiny fanaraha-maso hafa, ary manara-maso ny fifandraisanao amin'ny votoaty tafiditra ao anatin'izany, ary ahitana ny fanaraha-maso ny fifandraisana amin'ny votoatin'ny tranokala raha manana kaonty ianao ary miditra amin'ny tranonkala.
Ny fizarana ny angon-drakitrao
Lahatsoratra soso-kevitra: Raha mangataka famerenana ny teny miafina ianao dia ho tafiditra ao amin'ny mailaka famerenana ny adiresy IP anao.
Hafiriana no mitazona ny angon-drakitrao izahay
Lahatsoratra soso-kevitra: Raha mamela fanehoan-kevitra ianao dia hajaina mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanehoan-kevitra sy ny metadata. Izany no ahafahantsika mamantatra sy mankato ny fanehoan-kevitra manaraka avy hatrany fa tsy mitazona azy ireo amin'ny filaharam-potoana maoderina.
Ho an'ireo mpampiasa misoratra anarana ao amin'ny vohikalantsika (raha misy), dia mitahiry ny fampahalalana manokana omen'ny mpampiasa azy ihany koa isika. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mahita, manova na mamafa ny mombamomba azy manokana amin'ny fotoana rehetra (afa-tsy hoe tsy afaka manova ny mpampiasa azy izy ireo). Ireo mpitantana tranonkala dia afaka mahita sy manitsy izany vaovao izany.
Ny zon'ny zo anananao
Lahatsoratra soso-kevitra: Raha manana kaonty eto amin'ity tranonkala ity ianao, na nametraka fanehoan-kevitra, dia azonao atao ny mangataka ny handraisana ny antontan-taratasinao manokana momba ny tenanao manokana, anisan'izany ireo angona nomenao anay. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny hamafa ireo angona manokana hitanay momba anao. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny angona angatahantsika hitazomana ny tanjon'ny rafitra, lalàna, na fiarovana.
Aiza no handefasana ny angon-drakitrao
Lahatsoratra soso-kevitra: Ny fanehoan-kevitry ny mpitsidika dia azo jerena amin'ny alàlan'ny serivisy fanaraha-maso spam iray.